Ophikisana noHomo: izici, imvelaphi nokuvela | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ekuguqukeni komuntu njengoba sazi namuhla, kube nezinhlobo eziningi. Enye yazo yi- U-Homo u-antecessor. Luhlobo lwezinhlobo zezilwane ezichitha zingasekho kodwa ezohlobo loHomo futhi lubhekwa njengomkhuba wokuqala futhi omdala kunayo yonke eYurophu. Ngokusho kwezinsalela zezinsalela ezitholwe kulo muntu, kwakwaziwa ukuthi yayikhona cishe eminyakeni engama-900.000 edlule.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izici, imvelaphi nokuvela kwe U-Homo owayengaphambi kwakhe.
2 Ukunwetshwa kwe-Hominid ne-Homo eyandulelayo
3 Ukufana phakathi kukaHomo owayengaphambi kwakhe noHomo sapiens
Kuyinhlobo engeyomuntu nokuthi ulayini wokuziphendukela kwemvelo uphakathi kwe- UHomo heidelbergensis futhi i I-Homo neanderthalensis. Kwakuyi-hominid yokuqala ehlala eYurophu futhi idabuka e-Afrika. Cishe bonke ososayensi bacabanga ukuthi kungumbhede wesintu futhi ukufuduka kwaba ngasikhathi sinye beya eYurophu nase-Asia. Kulinganiselwa ukuthi endabeni yesikhathi somkhuba womhlaba ngesikhathi se- I-Pleistocene phansi. Ezinye zezici lolu hlobo lwazo olunazo zasendulo kanti ezinye zesimanjemanje. Lokhu kunquma ukuthi ukuxubana kokuziphendukela kwemvelo koshintsho ekuguqukeni komuntu.
Imali yokuqala yalezi zinsalela yilezo ezazikhona edolobheni laseCeprano e-Italy. Ukusuka lapho sekuyaziwa ngegama elijwayelekile lendoda yaseCeprano. Ingcezu enkulu yezinsalela efundwe ngokujula okukhulu yileyo yogebhezi olunezici ezahluka phakathi kwezakudala nezanamuhla. Obunye bobufakazi besayensi obulinganisa iminyaka yalesigebhezi yilokho ibhalwe cishe iminyaka engama-900.000 ubudala. Njengoba inezici ezahlukahlukene ze-phylogenetic, chronological and archaeological ezifanayo nalezo zezinye izinhlobo, yabizwa ngegama lomhloli wamazwe noma iphayona.
Izinsalela ezigcinwe ezimeni ezingcono umhlathi ongaphezulu kanye nethambo elingaphambili lomuntu osemusha okuphila kwakhe sekushonile kulinganiselwa ukuthi kwenzeka cishe eminyakeni eyi-11. Endaweni efanayo lapho kutholakala khona lezi zinsalela, kwabalwa izingcezu ezimbalwa zamathuluzi wamatshe namathambo ezilwane eziningi. Lokhu kukhombisa ukuthi lo muntu ubesengawakha amathuluzi. Kwenzeka into efanayo nge I-Homo neanderthalensis noma i Homo habilis.
Yize kwaziwa ukuthi wonke lawa mathambo nezinsalela kungenxa yesikhathi seminyaka ecishe ibe yisigidi edlule kuyabiza ukwazi ukuwaqhathanisa ngqo. Futhi ukuthi ingxenye ngayinye yomzimba nokwakheka komzimba kufana nabantu abahlukene bamaqembu eminyaka yobudala.
Ukunwetshwa kwe-Hominid kanye ne U-Homo u-antecessor
Okungaqinisekiswa ukuthi izinsalela zinezici ezithile ezihlukile ezifanayo. Futhi cishe zonke Bavela kubahlali bakudala ababehlala e-Afrika kanti abanye asebevele bathuthele eYurophu. Phakathi kwezici zomzimba nezokuphila zalesi silwane sithola inhlanganisela kugebhezi kanye namazinyo kanye nomhlathi ophansi ohlukile kweminye imivubukulo yohlobo loHomo. Ezinye izinsalela zifana ne-morphology kubantu banamuhla kepha ngebala eliqinile kancane. Ukuphakama yisilinganiso esisuka kumamitha ayi-1.6-1.8, esingadluli esamanje Homo sapiens. Isisindo salaba bantu sasilingana cishe phakathi kwama-65 no-90 kilos, ngakho-ke icishe ifane nalena yamanje.
Ukhakhayi lunenhlanganisela ethile yezici zesimanje nezakudala. Phakathi kwezici zesimanjemanje, i-canine fossa, amathambo agobeke kakhudlwana kanye nekhala eliphumayo. Lezi zingxenye zinikeza ukubukeka kwesitayela okuthe xaxa kunalokho kwehluka kwezinye izinhlobo ezindala. Ngakolunye uhlangothi, uma sihlaziya izici zasendulo, siyabona ukuthi inebunzi elingezansi nomugqa ophawulwe ngaphambili. Igumbi layo le-occipital nalo livelele kakhulu, ikakhulukazi ngemuva kogebhezi.
Ngokuqondene nosayizi wobuchopho, buba buncane kunomuntu wamanje. Yize kungewona umehluko omkhulu, ubunomthamo ophansi ngaphezudlwana kwesilinganiso samanje. Izici zamazinyo zakudala zigqama ngokuba namazinyo aqinile kanye nama-premolars anezimpande eziningi ze-incisor ezisebenzela ukugaya ukudla kangcono. Izici ezibhekwa njengezanamuhla maqondana nomlomo zihlobene nama-canines. Futhi, amanye amazinyo angaphambili angahlukaniswa ngoba ziyabonakala ngosayizi omncane uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo ze-hominid.
Izindlela zokuqhuma kwamazinyo zitholakale zifana nabantu banamuhla. Lezi ziphetho ziholela ekutheni la ma-hominid abe nezinga elifanayo lokukhula ngokwamazinyo.
Ukufana phakathi kwe- U-Homo u-antecessor futhi i Homo sapiens
Sizohlaziya ukuthi yiziphi izici eziyinhloko ezifanayo kuzo zombili izinhlobo. Ngalokhu, kufanele sicabangele inani eliphelele labantu abakulesi sakhi. Yena U-Homo u-antecessor Ingenye yezinhlobo ezinokufana okufana kakhulu nomuntu wamanje. Into yokuqala okufanele siyicabangele ukuqhathanisa ukukhula kwayo. Luhlobo lokukhula olufana nolwethu. Isigaba sobuntwana nesobusha sidlula ngokunensa kunasesimweni sezinye izinhlobo. Ngohlobo lwethu Sinesikhathi sokukhula ngaphambi kokuba siqhathanise ngokulingana nesikhathi sokuphila okuphelele.
Izici zalolu hlobo zingaba ukuxubana phakathi kwezakudala nezanamuhla. Kunemininingwane ethakazelisa ngokwengeziwe maqondana nalezi zinhlobo nokuthi lokho kwakuthathwa njengesibonelo esihle kakhulu. Ngaphambi kwalezi zinhlobo ezithile, amanye ama-hominids ayethandana noma okungenani ayengenawo umkhuba ophawulekile wokusebenzisa elinye lamalungu ngokuqinile.
Esinye isici esingaqhathanisa nesibaluleke ngokweqile amashiya nebunzi. Uma siqhathanisa amashiya nebunzi le- U-Homo u-antecessor nalokhu komuntu wamanje siyabona ukuthi bekufana kakhulu. Kodwa-ke, lezi zimfanelo zingatholakala nakwezinye izinhlobo eziguquke kakhulu ezivela egatsheni elihlukile lokuziphendukela kwemvelo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge U-Homo u-antecessor kanye nezici zabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » U-Homo u-antecessor